Yugyan Daily » कर्णालीमा प्रवेश गर्न पीसीआर अनिवार्य, होटल रेस्टुरेन्ट बन्द
कर्णालीमा प्रवेश गर्न पीसीआर अनिवार्य, होटल रेस्टुरेन्ट बन्द
प्रदेशमा तत्काल १५ आईसीयू थपिने
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमढा बढेसँगै कर्णाली प्रदेशले नाकामा कडाई गरेको छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीएमसी) ले भदौ १ गतेदेखि कर्णाली प्रवेश गर्न पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशमा प्रवेशका लागि कम्तीमा तीन दिन अगाडि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको निमित्त प्रदेश प्रमुख सचिव आनन्द सारुले बताए । उनले अघि भने,‘अब रातको समयमा प्रदेशमा पूर्णरुपमा प्रवेश वन्द गरिने छ ।’
प्रदेश भित्रिने मुुख्य नाका सल्यानको कालिमाटी, काल्चे, कपूरकोट, सुर्खेतको बबई र कुइनेमा पीसीआर रिपोर्ट हेरिनेछ । बाहिरबाट आउनेहरूमार्फत संक्रमणको जोखिम भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको निमित्त प्रमुख सचिव सारुले बताए ।
पास बनाएर आएका व्यक्तिहरूले पनि पछिल्लो तीन दिनयताको पीसीआर रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने छ । देश भित्रबाट आएका र भारतबाट आएका नेपाली नागरिकहरुलाई छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
होटल तथा रेष्टुरेन्ट बन्द
संक्रमणको नियन्त्रण गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलगायत मुख्य बजार क्षेत्रका होटल तथा रेष्टुरेन्ट भदौ १ गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।
कतिपय होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई भने स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गरिने निमिक्ति प्रमुख सचिव सारुले बताए । ‘कुनै व्यक्ति व्यक्तिगत रुपमा होटलमा आइसोलेसनमा बस्न चाहेमा सुरक्षासहित बस्ने व्यवस्था गरेका छौं’ उनले भने ।
त्यस्त प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको गोठीकाँडा र काँक्रेबिहार क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिसहरु घुमफिरका लागि जाने भएकाले त्यहाँ जान समेत रोक लगाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा १५ वटा आईसीयू बेड थप्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश पीसीएमसीको बैठकले दैलेख, कालीकोट र सल्यान जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू बेड थप्ने निर्णय गरेको हो । खरिद जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
प्रदेशका तीनवटा जिल्ला अस्पतालमा तत्काल ५/५ वटा आईसीयू र १/१ वटा भेन्टिलेटर थप्ने तयारी थालिएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिए । मन्त्री रावलका अनुसार अबको दुई हप्ताभित्र आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइहरहेको छ । सुर्खेत र जुम्लामा पनि आईसीयू र भेन्टिलेटर थप्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
कर्णालीमा हाल सुर्खेत, जुम्ला र दैलेख अस्पतालमा गरी ४० आईसीयू र १७ भेन्टिलेटर वेड छ ।
एक पालिका एक क्वारेन्टिन
भारतबाट फर्किएका नागरिकहरुलाई स्थानीय तहले विद्यालयमा क्वारेन्टिन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय भारतबाट फर्किनेहरुो संख्या घट्दै गएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टिन नबनाउन आग्रह गरेको छ ।
अब ‘एक पालिका, एक क्वारेन्टिन र आइसोलेशन’ बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ । भारतबाट आउने नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा सीमा नाकाकै क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । क्वारेन्टिन भरिने स्थिती भएमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भवनलाई प्रयोग गरिनेछ ,
थप सचेत हुन चिकित्सको सुझाव
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले नागरिकहरू थप सचेत हुन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नागरिकहरू आफैं सचेत बन्नुको विकल्प नरहेको औंल्याएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले नागरिकले सचेत र सतर्क भएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाए मात्र संक्रमणको जोखिम कम हुने बताए । सरकारले पनि आवतजावतमा कडाइ गर्नुपर्ने सुुझाए । ‘कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा ठोस कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ’ उनले भने, ‘नागरिकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।’
प्रदेश अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. केएन पौडेलले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न मुख्यगरी सीमा नाकामा कडाइ गर्नु आवश्यक रहेको औल्याए । अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।